मलाई नेपाल र नेपालीको साथ भो भने पानी नारा यु एन सम्म पुर्याउनेछु - Enepalese.com
मलाई नेपाल र नेपालीको साथ भो भने पानी नारा यु एन सम्म पुर्याउनेछु
इनेप्लिज २०७४ जेठ १ गते २:२८ मा प्रकाशित
मलाई नेपाल र नेपालीको साथ होस् ।” “हरेक घर धारो , हरेक गाउँ सिंचाइ” नारालाई यु एनसम्म पुर्याएर समाजमा स्थापित गरेरै छाड्नेछु । मेरो लडाइ नत सरकारसित हो नत धर्मसित हो न त देश सित हो । मात्र ८ हजार किलोमीटर टाढाको जनता मार्न तम्सिने तर दुनियाँलाई आवश्यक पर्ने पानी नारा पूरा गर्न किन नतम्सिने ? मंगल ग्रहमा वस्ती बसाल्छु भनेर ठूला गफ लगाउने तर यहीँ पृथ्वीमा पानी नारा पूरा गर्न किन नतम्सिने ? कथित वैज्ञानिक सरकारहरुले किन नसोच्ने ?किन विज्ञानलाई उचित प्रयोग गरेर अभियानको नारा पूरा गर्न अगाडि नबढ्ने ?
हामी सफल हुन्छौ हुनेछौ पनि । पानी बगाएर समाज परिवर्तन हुने कुरामा हामी किन नजाग्ने ? मात्र एकपटक दुनियाँ जागे युगौयुग जाग्नु नपर्ने पानी अभियानमा गोलवद्द बनौ ।पुजीलाई नै ठूलो देख्ने समाजमा यो यात्रा धेरै जटिल छ तर पनि कठोर यात्रा भएको हुनाले जुन दिन सम्म अभियान शुरु भएको गाउँमा नारा पूरा हुने अवस्था सृजना हुँदैन त्यो दिन सम्म घर नै जादैन । यो मेरो भीष्म प्रतिज्ञा हो । स्थानीय निर्वाचनमा जित्ने पदाधिकारीले पनि कुनैपनि हालतमा पानी नारा पूरा गर्ने सोच राखुन् ।